Solar eclipse: Chishanu ichi 13 - iri zuva rinotyisa here? | TeraNews.net
Solar eclipse: Chishanu ichi 13 - iri zuva rinotyisa here?
Munyori Ekaterina Yakabudiswa pa 12.07.2018
NeChishanu Chikunguru 13th, 2018 ichave yakatarwa neimwe chiitiko. Chikamu chezuva kupora kwezuva. Kune vanhu vazhinji, zuva uye chiitiko chinoratidzika semweya. Zvirinani pane zvemagariro enhau, Chikunguru 13 inopisa kupokana.
Iko hakuna kutaura kwekuguma kwenyika, uye hapana munhu akamirira mutumwa weapocalypse. Chii chinofadza. Nekudaro, vazivi venyeredzi, vachiedza kubatsira vagari vepasi, vanokurudzira, zuva rino, kuramba nzendo refu uye kushandisa nguva yekuzvibatsira ivo nemhuri yavo.
Solar Eclipse: Chishanu iyo 13
Kana iri nyeredzi pachayo, havasi vanhu vese vanozoona chiitiko ichi. Izvo zvichave zvichakwanisika kutarisa kuwanda kweSuva Moon pamhenderekedzo yekumaodzanyemba kweAustralia, kubva kuchitsuwa cheTasmania uye kubva muchikamu cheAntarctica. Pfungwa yakanakisa yekutarisa richava guta reHobart pachitsuwa cheTasmania. Panguva dza13 - 24 nguva yemunharaunda, Mwedzi uchavhara iwovhenekera ne 35%.
Vanhu vazhinji vanozoona zviitiko chete mune mafoto ane chokwadi chekuonekwa kune network.
Nyanzvi dzeNASA dzinocherekedza kuti kazhinji kuitika kwezuva kunoitika zuva hakuwanzo kuitika pazuva rakakosha zvakadaro. Nguva yekupedzisira, musi weChishanu wa13, kupora kwezuva kunoonekwa muna Zvita 1974. Iyo inotevera kusarudzika kwezuva, ichidonha neChishanu iyo 13, ichaonekwa nevagari vePasi chete muna 2080.
HAANCEEN H30 TV Bhokisi ye Android 10
Supercomputer ndiyo yakasimba kwazvo komputa pasi
Inotakurika Magetsi Weboti - Inotakurika Inzvimbo yeMoto
$ 3 Apple Watch Series 50